Wararka Suuqa Kala Iibsiga Ee Laga Qoray, Haaland, Sancho, Messi, Salah, Ibrahimovic, Foyth
HomeWararka Ciyaaraha MaantaWararka Suuqa kala iibsiga ee laga Qoray, Haaland, Sancho, Messi, Salah, Ibrahimovic, Foyth
April 6, 2021 Wararka Ciyaaraha Maanta, Suuqa kala iibsiga, Wararka Wargeysyada 0
Wakiilka weyn Mino Raiola ayaa ka jawaab celiyay wararka xanta ah ee ku saabsan suuqa kala iibsiga ee ku aadan weeraryahanka reer Norway ee Borussia Dortmund Erling Braut Haaland, oo 20 jir ah (Goal)
Madaxa fulinta kooxda Borussia Dortmund Hans-Joachim Watzke ayaa ku adkeysanaya in kooxda Jarmalka ay qorsheyneyso xilli ciyaareedka soo socda Haaland. (Mirror)
Si kastaba ha ahaatee, wuxuu sheegay in kooxda ka ciyaarta Bundesliga ay dhageysan doonto dalabyada u imaanaya garabka kooxda reer England Jadon Sancho. (Manchester Evening News)
Maamulaha Pep Guardiola ayaa sheegay in Manchester City laga yaabo inay go’aansato inay 100 milyan oo ginni ku qarashgareyso hal ciyaaryahan mustaqbalka, laakiin weli wuxuu ku sii jeedaa wararka xanta ah ee kooxda la xiriirinaya Haaland. (Sky Sports)
Barcelona ayaa sii wadi doonta raacdeynta saxiixa ciyaaryahanka reer Norway ka dib markii ay la kulmeen wakiiladiisa isbuucii hore, laakiin ilo ka tirsan kooxda ayaa sheegaya inay “aad u adag tahay” in heshiis la sameeyo. (ESPN)
Goolhayaha reer Spain David de Gea, oo 30 jir ah, ayaa diyaar u ah inuu ka dhaqaaqo Manchester United. (Dailymail)
Tababaraha Real Madrid Zinedine Zidane ayaa ka baxay aamusnaantiisa wararka la xiriirinaya Liverpool iyo Egypt Mohamed Salah, 28, inuu u dhaqaaqayo Bernabeu. (Liverpool Echo)
Arsenal ayaa dooneysa inay sii heysato ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer Norway Martin Odegaard markii uu amaahdiisa Real Madrid ka soo dhamaaday, laakiin Liverpool ayaa sidoo kale xiiseyneysa 22 jirkaan. (AS)
Villarreal ayaa rajeyneysa inay la soo saxiixato daafaca reer Argentine Juan Foyth, 23, oo ka socda Tottenham xagaagan heshiis joogto ah iyo in ka yar qiimaha xulashada oo ah 13 milyan oo ginni. Wuxuu haatan amaah ugu ciyaarayaa kooxda reer Spain. (Footballinsider247)
Jorge Valdano, maareeyihii hore ee Real Madrid, ayaa u furan fikirka Los Blancos iyadoo la adeegsanayo garabka reer Brazil Vinicius Junior, oo 20 jir ah, taasoo qeyb ka ah heshiiska lagula soo wareegayo Paris St-Germain iyo weeraryahanka France Kylian Mbappe, oo 22 jir ah ( Marca)
Daafaca Arsenal iyo reer Brazil David Luiz, oo 33 jir ah, waa inuu dhimo mushaharkiisa hadii uu doonayo inuu sii joogo kooxda ka ciyaarta Premier League wixii ka dambeeya xagaagan. (Theusn)
Weeraryahanka Paris St-Germain Angel di Maria, oo 33 jir ah, ayaa sheegay inay “wax cajiib ah tahay” inaan ka garab ciyaaro xiddiga reer Argentina Lionel Messi, oo 33 jir ah, iyadoo shaki laga qabo mustaqbalka Messi ee Barcelona . (AS)
Milkiilihi hore ee kooxda Roma ahna gudoomiye James Pallotta ayaa muujiyay xiisaha uu u qabo inuu iibsado koox ka ciyaarta Premier League, isagoo hubinaya magaca kooxda Newcastle United. (Theathletic)
Halyeeyga reer Sweden Zlatan Ibrahimovic, oo 39 jir ah, ayaa qarka u saaran inuu qandaraas kordhin hal sano ah u saxiixo AC Milan. (Sky Sports)